Jubbaland oo la timid 5 Qodob oo cusub. "Waa inuu Farmaajo raaligelin ka bixiyaa waxyeeladii.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Jubbaland oo la timid 5 Qodob oo cusub. "Waa inuu Farmaajo raaligelin ka bixiyaa waxyeeladii.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Jubbaland oo la timid 5 Qodob oo cusub. “Waa inuu Farmaajo raaligelin ka bixiyaa waxyeeladii..”
Maamulka Jubbaland ayaa si looga baxo xaaladda ka dhalatay weerarkii ay dowladda Federaalka ku qaaday Musharixinta Madaxeynaha iyo Bannaanbaxyadii ay awoodda u adeegsaday soo jeediyey 5 Qodob oo culus.
QOraal ka soo baay Xafiiska Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa looga dalbaday dowladda Madaxweyne Farmaajo inay raalli gelin iyo Garwoshiyo ka bixiso tallaabadii lagu weeraray Musharaxiinta iyoo in Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ka dhex baxo, wax door ahna ku yeelan hannaanka doorashooyinka, si loo helo kalsoonida saamileyda siyaasadeed ee dalka.
Waxay kaloo Jubbaland soo jeedisay in la isugu yimaado shir ay ka soo qeyb galaan dhammaan saamileyda siyaasadeed, kaasoo goobta uu shirkaas ka dhacayo ay noqoto meel amnigeeda lagu kalsoonaan karo, mas’uuliyadeedu lahaato Beesha Caalamka.
Waxaa kaloo Beesha Caalamka ay ka dalbatay inay laga helo damaanadqaad ku aadan fulinta natiijada shirkaas.
HOOS KA AKHRISO WAR-SAXAAFADEEDKA JUBBALAND.
Previous articleDad caan ah oo Cudurka Covid-19 ugu geeriyooday Isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho
Next articleDowladda Soomaaliya oo Maalin Gudaheed soo saartay Amar ka dhan ah Digniin ka timid Mareykanka